トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Hanemono Kulungile theory umda?
Kwiminyaka yakutshanje, kuba ikhutshwe lowu abaninzi pa, inkcazelo iye yaba lula ukuba ufake isandla. Ngoko ke, ukuba umntu wabetha pa, kanye, mna think're nomdla Ngokuba wabona bathi ithiyori umda.
Apha, ithiyori umda, Ndingathanda ukuthatha look. Kuqala kwinto zonke, phambi kokuba ibali theory umda, kukho into leyo kuthiwa asemdeni. Lo matshini pa, kukho hit amathuba enkulu, ngokulandelelana. Umgca umda, ukuba jackpot kwi jackpot okuba yokubutha kwamadoda matshini, imali iye cashed isixa imali ukuba utyalo-mali, uthi lwendawo yesebe ukuba dibanisa okanye thabatha 0.
kwimeko of pa na, lo mgca umda, amathuba big hit nokuthetha Izinga Chang, njl, kwakhona ibalwe-ezahlukahlukeneyo amaxabiso lwamanani, lubonakaliswa njenge inani revolutions zamawaka yen. umatshini pa kukuthi, ngaphakathi nangaphandle, ukuphinda okanye phandle, sinako ukuze livuma ukuba amathuba jackpot eyayisekwe.
Ngoko ke, hit nomda okanye iyafa ngaphezulu esele ezimiselwe ngomatshini ngamnye, xa ukuba idibane nangamaxesha jackpot okuba kumatshini, ngenxa yokuba ngeniso kukuthi, 's ingcamango theory umda.
inene, kwakubekwe, kodwa ndicinga ukuba kuza kuba njalo, singahambi okunene ukwenza oku kakuhle oko. Ethetha kutheni, nesendlu pa iye iinzipho ingalungelelaniswa venkile wenziwe. nesendlu pa wena uhlengahlengiso isikhonkwane kwesitrato umgca umda, kubonakala ukuba akukho ekuqaleni.
ukuba isikhonkwane ngokuqinisekileyo evulekileyo ehlabathini ekuqaleni, xa ucinga ukuba kukho ngaphaya kwemida, njl Ukuba liqiniswe uhlengahlengiso kuzipho ngeenxa umhlaseli, ukuba sele apha naphaya, ezifana ukukrwela ibhola, nangona kakhulu uqale ngeenxa zonke, sinciphise intlawulo iza kuba ngokukhawuleza. Xa kuziwa
yonke intlawulo ethile, ukuvula kuphela uzipho kuphela endhawini ekuqaleni, mna into iba ayanelanga. Ukuze benze oku ithiyori umda, zicwangciswe xa ubuso ibhodi, sijonga sonke kuhlengahlengiswa iinzipho, kunciphisa yeebhola Kufuneka ukhethe itafile encinane.
kangangoko kunokwenzeka ekudala elindelwe ngaphandle ibhola, ngaphandle ukunciphisa, ukuba bavumele hit enkulu elandelayo, kodwa ukuba ukhangela iyonke yohlengahlengiso lwentlawulo, uba ezimbi, ngenxa yokuba imfundiso umda akusekho wanelisekile.
, Noko ke, kukuba le pa wabeka ithiyori umda entlokweni yam, ukuze uwine Ndicinga ukuba kakuhle kakhulu. Kwimeko of pa kukuthi, ngexesha yokuhlangabezana ukuya hit okuba enkulu, ukuze enze imali lixabiso lenani engenamsebenzi kwaye Sukucima oku kakhulu amawaka yen lisezantsi.
ukukhokela isantya yayo ojikeleza ngaso, xa sikhetha eqongeni, ngaphezu adubule imane ndicinga ukuba isiphumo enye elungileyo. Ukuze ube ithiyori umda, ukuthatha ixesha, kufuneka uqokelele i data kananjalo kwenziwe kwithuba elide.
Noko ke, ekubeni hit ngethiyori, kusenokwenzeka ukuba kukho uxabisa itrayi.